Linaro dia manatsara ny fahombiazan'ny Android 4.0.4 hatramin'ny 100% | Avy amin'ny Linux
Android tsy ny tena mahagaga ny Fanatsarana ny loharanom-pahalalanaNy mandà izany dia hanala baraka ny tenanao. Google Miasa am-pahamendrehana izy io mba hanatsarana azy isaky ny Android, asa mafy, saingy mety ho mora kokoa amin'ny tetikasa iraisana izay tsy dia mampanantena loatra. Miresaka isika linaro.
Raha mijery ao anaty ny ankamaroan'ny gadget Android ananantsika eny an-tsena isika dia saika hahita mpikirakira miorina amin'ny maritrano ARM. Io no ary nanjary ny sehatra lehibe indrindra amin'ny fitaovana finday noho ny tahan'ny fanjifana herinaratra. Vokatr'ity firaisana sendra hita teo amin'ny lozisialy maimaim-poana sy ny maritrano ARM ity dia teraka i Linaro, fototra natsangan'ny orinasa toa ny Samsung, IBM na Texas Instruments, izay miandraikitra ny fikarohana sy ny fanandramana manatsara ny fampidirana ireo rafitra miasa malalaka. miaraka amin'ny processeur. ARM
Ao amin'ny horonantsary nataon'izy ireo momba an'io, hitantsika ny fomba manome valiny tena hafa tanteraka ireo takelaka roa misy fitaovana mitovy amin'ny Motorola Razr. Ny iray amin'izy ireo dia mampiditra ny Android fototra, satria ny Google mandefa ary ny takelaka hafa dia mampiditra kinova Android fototra novain'i Linaro. Miteny ho azy ireo isa.
Ity karazana kaody ity dia hampiharin'ny chef toa Cyanogen ao amin'ny ROM misy azy ireo mahita ny valiny tsara azony. Fitambarana mahafaty, Cyanogenmod izay efa iray amin'ireo ROM malaza indrindra miaraka amin'ity kaody napetraka ity izay hanatsara kokoa ny zava-bitany.
Saingy avy amin'izany dia mamintina fehin-kevitra isika ary izany dia ny Android dia tsy voararaotra araka ny tokony ho izy, zavatra izay tsy maintsy ahitsy Google. Tadidio fa fiovana feno habibiana tamin'ny fampisehoana ankapobeny i Froyo ary nialohavan'i Eclair, izay nampiditra interface tsara tarehy kokoa. Tsy mampatsiahy anao inona izany? Ankehitriny dia manana ICS izay manana interface tsara izahay saingy ny fanatontosana azy dia mbola azo hatsaraina ihany ka iza no mahalala raha toa ny Jelay Bean hiasa toa an'i Froyo, hanatsara kokoa ny zava-bita fa tsy hampiditra asa vaovao.
loharanom-baovao: elandroid maimaimpoana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Linaro dia manatsara ny fahombiazan'ny Android 4.0.4 hatramin'ny 100%
Ary mbola misy ny olona manontany ahy hoe maninona aho no misafidy Android na Linux? haha izany no antony ary noho ny antony maro hafa dia tiako ny penguin, manaitra fa afaka manome hatramin'ny 100% izy ireo! zavatra tsy manam-paharoa ary hita eo amin'ny tontolon'ny rindrambaiko maimaimpoana ihany!
Heveriko fa ireo orinasam-pifandraisana dia mazava ho azy fa tsy liana amin'ny fanatsarana ny rafitra mba hananana ireo kinova vaovao ho "mitaky be kokoa" momba ny fitaovana ary noho izany dia manentana ny fividianana terminal vaovao.